(Zulu) Izizathu Eziyisihlanu Ezibalulekike Ekumele Uzibukile Noma Uziqondile Ngokuba Isahlukeli | First365
Translated by: Itumeleng Diphoko
Into esabekayo emhlabeni uku wina noma ukuthola yonke into oyiunayo/oyiffsayo. Asikhulumi ngakho ,sijwayele ukuziba ngoba kunezinto eziningi esizithola ngokuwina noma esisizuza ngokuwina.
Kodwa ukwesaba okungadingeki okungenzeka ngokushesha ngokuphumelela kwethu kungeke kutholakale uma sekucwilile noma sekuphelile ,ngoba ukuphumelela kwenza into ibe nzima ukuba uyibuyisele emumva noma kwenza kube nzima ukubuyela emuva lapho uqale khona ngoba usuke usubona usuphumelele.
Uma sesiphumelele sizizwa singabonakali noma singaqamile, okuyilapho sizibeka egcupheni. Ukuvikeleka okwamanga ekuphumeleleni kusishiya engozini yokungabe sisafuna ukufunda ,ukwamuela,ukuboniswa kanye nokukhula,nokunye. uma sesiphumelele asifuni izinto zishitshe ngoba sisuke sihlukumezekile, sasebenza kanzima isikhathi eside ukuze siphumelele, sibe sesifuna izinto zihlezi zenzeka ngendlela efunwa ithina noma senze ngendlela yethu noma sazi ukuth yonke into ihamba ihambe ishitshe or izishitshe .Ngamanye amazwi ukuphumelela kusivimbela noma kusivalela ekutheni sikhuthale senze eminye imsebenzi singabe sisaba neminye imicabango noma isenze eminye imsebenzi .Futh ilokho okusabisa kakhulu ngoba ubona noma uqaphela ukuthi uzenze wena noma uzifake wena ngoba usubona ukuthi usuphumelele kubi ngoba lokho ukubona sekudlule iskhathi
Umangabe ukuphumelela kukubi ,ukuba Isahluleki kuyini? Mhlawumbe ukuba isahluleki /ukuhluleka kuwukhiye wokuqonda noma kukwenza ubone futhi uqonde ukuthi ,ukuqhubekela phambili ,ukuplana into ofuna ukuyizuza nokushitsha indlela ocabanga ngayo nosebenza ngayo ,nangendlela oziphatha ngayo okanye ophatha ngayo abantu ,kuyinzuzo futhi kubalulekike kwikusasa lakho njengo msunguli kanye nomholi.
1. Ukungabi Nesimo Sokungabi Njalo Akukhona.
Uma ugxile emkhakheni owodwa kuphela ukuthi umphumela owamukelekayo kuphela (okusho ukuthi uwina) uzungezile ngokungahambisani nokuningi. Isizathu salokhu kungcindezela. Uyazi ukuthi izinto eziningi kufanele zihambe kahle ukuze unqobe ukuthutha okungamanga okulodwa kungakubeka emuva noma kukuhluleke. Yenza imvelo yokungabi nandaba, isidingo sokuba nomsebenzi olawulayo kakhulu, futhi ube nokuqinile ngokuphawulekayo ngezikhathi ezithile zokugcina kanye nemiphumela elindeleke kumaqembu. Lokhu kudala imvelo enokuncintisana kakhulu futhi enenzondo okuvame ukuholela ekusimeni emaqenjini akho ngoba abantu abaphumelelanga noma bathole injabulo ezindaweni lapho bahlale beqashwe khona futhi behlolwe. Ngokweqiniso, akuyona into engokwemvelo ukuthi abantu basebenze ngaleyo ndlela, kodwa namanje yilokho esicabanga ngokuwina. Ukunqoba kutholakala ngokulawula.
Uma ukwehluleka kuyinketho ingcindezi ivaliwe wonke umuntu ohilelekile. Okusho ukuthi isikhathi esichithwa ukubika kumalungu eqembu ukuthi angenzanga kahle ngokwanele singasetshenziswa ekwakheni uzwela nokuzama ukuqonda ibhizinisi lakho ngamehlo alabo abahlanganyela nalo nsuku zonke. Asikho isidingo sokungabi nalutho ngoba wonke umuntu uzama okusemandleni akhe. Futhi uma uzizwa ukuthi abengekho, ungaxoxa nabo futhi ufunde ukuqonda, ngaphandle kwemizwa efana nesikhathi idonswa ngokuba nengxoxo nomuntu osebenza naye nsuku zonke.
2. Ungalindela ukuthi Izinto Zingahambi Ngendlela Oyifunayo
Izinto ziyashintsha. Izinto zihamba kabi. Ngezinye izikhathi akukho okungahambi kahle ngaphakathi, kodwa ngaphandle kuhamba kabi (cabanga ngomkhankaso we-PR ongamukelekile).
Uma wamukela ukuthi izinto ngeke zihambe njengoba kuhleliwe kusho ukuthi ungakha uhlobo lwenkambiso yenkampani olusha futhi olungashintsha ngesikhashana.
Kukhona indawo eyengeziwe yobuciko nokusebenzisana okubalulekile ngoba kugxile ebuhlotsheni.
Kokubili ubudlelwane bangaphakathi enkampanini kanye nobuhlobo benkampani nenhloso yayo, kokubili kungashintsha nganoma isiphi isikhathi, kulindeleke, futhi kukhona izinhlelo lapho khona lezo zinguquko eziphuthumayo zingaphathwa ngokucophelela futhi zihlonywe kunokuba zinganakwa noma zenze uzizwe zingabalulekile kumpumelelo yezezimali .
Kunzima kakhulu ukuxazulula inkinga endaweni elawulwayo, ngoba ugxile kakhulu emqondweni wakho wokunqatshwa nokugxekwa, kunokuba yonke inkampani izwe ikhululekile futhi ijabulelele umqondo wakho ukuxazulula lenkinga ekhungethe wonke umuntu.
Uma ukwehluleka kulungile futhi kwamukelwa, kusho ukuthi imibono emibi yamukelekile, futhi ngezinye izikhathi indlela engcono kakhulu yokuthola imibono emihle ukuqala ngemimbi – kodwa ukuze lokho kwenzeke, abantu kudingeka bazizwe behlelekile ukuba engozini futhi babelane ngemibono engase engacacile futhi ekungenzeka inganqobi .
3. Amaphupho Akho Makhubalo
Impumelelo yethu enkulu iyaye ifezwe abantu, uma ubabuza, cishe bayokutshela ukuthi abazange bacabange ukuthi kuzokwenzeka.
Babengazi ukuthi kwakungenzeka, kungabi nhlobo ukuthi kukhona nokuqiniseka kokuwina.
Kungani bebengayifinyelela? Ngoba uma uphupha kakhulu kakhulu kangangokuthi kubonakala kungenakwenzeka, uma uthola izingqondo eziqondene ndawonye, ​​umzamo wodwa uyamangalisa.
Ukuzama kuyilungelo ngoba yiphupho lakho.
Ukuze usondele kungasho ukuthi yigxathu elikhulu kakhulu lokuthi noma yikuphi ukuthuthuka kunenzuzo.
Ukuqiniseka kungenzeka, kodwa kuphela lapho iphupho lakho lilincane. Futhi kufanele ukhokhele abantu imali eningi ukuze banakekele iphupho elincane futhi bafike emsebenzini nsuku zonke.
Uma iphupho lakho lilikhulu, cishe lingenakwenzeka, abantu bazozidela kakhulu ukuba yingxenye yalo. Ngakho-ke, faka imigomo yakho, bese uyiphindaphinda kabili, noma-kathathu.
Ngaleyondlela ngisho nalapho ungafinyeleli ephusheni lakho ngempela, uyobe wedlule umgomo wakho wokuqala.
4. Sonke sihluleka kanyekanye/simunye
Yiliphi iqembu esilikhonze kakhulu: yilelo esazi ukuthi lizophumelela, noma ithimba elingeke lize lifike kwelamanqamu?
Sizokhetha elingaphansi ngenxa yento eyodwa elula indaba. Ukuphila kahle kuphila impilo yokuzijabulisa, yokunqoba izinkinga, yokwenza kwenzeke ngoba ukholelwa kuyo.
Sonke sifuna ukuzizwa njengamaqhawe ngandlela-thile, kodwa akunakwenzeka uma ukunqoba kungacatshangwa njengomphumela owodwa kuphela -nomakanjani.
Uma wonke umuntu ekwazi ukuthi angahluleka, bayazi nokuthi kuyinto abazohluleka ngayo ndawonye. Yingakho ifilimu amakhulu amathathu yayithandwa kakhulu kangaka.
Sikholelwa kubo ngoba babeningi kakhulu, kwakubonakala kungenakwenzeka. Cabanga ngamandla kanye nokuqiniseka kwanoma yiliphi iqembu elihlangene kungakhathaliseki ukuthi kungenzeka yini ukwehluleka? Ngeke yini ufune ukuba ingxenye yalokho?
5. Samukela Ubuthakathaka Bethu
Uma ucabanga nje ngokuwina ngokungafani kakhulu ucabange ngezizathu zokuthi ngeke yini, ngoba ukungabaza kuyinto ephikisanayo nokuqiniseka. Ukufuna ukuwina kusho ukuthi uyimpumputhe ebuthakathakeni bakho, okusho nje ukuthi awunakwenzeka ukuthi ukhule unamandla.
Uma kungenzeka ukuthi ukwehluleka kwamukelekile, kunjalo nobuthakathaka bethu. Siyakwazi ukuhlola thina namathimba ethu, ukuqonda kangcono ukuthi izinto zingcono kangakanani. Ngamanye amazwi: ukwamukela ukwehluleka ukuthobeka nokulamba ukuthuthukiswa ngaso sonke isikhathi. Ukuthuthuka akunakwenzeka ngaphandle kokwamukela ubuthakathaka, futhi enkampanini ekhuluma ngobuthakathaka kanye nemibango yamalungu weqembu kuphela iqinisa konke.
Uma imigomo yethu inkulu kunokuphila, futhi amaqembu ethu akhula futhi asondelene kakhulu nsuku zonke, ukuhluleka kubalulekile, ngoba intuthuko iyaqhubeka. Ukugxila kuwo wonke umuntu kukuthile abakholelwa kukho konke, kungakhathaliseki ukuthi bayethemba ukuthi kungenzeka noma cha, futhi nsuku zonke basondelana nalokho okubonakala kungenakwenzeka. Konke ukwehluleka kusho ukuthi kunomsebenzi omningi okufanele wenziwe.
Iqiniso liwukuthi ukuhluleka akuyona into ehlukile yokuwina, ngoba ukwehluleka akulahlekelwa. Ukuhluleka uma ungakafiki umgomo wakho wokugcina. Ukulahlekelwa yilapho ungasamukelekile ukuzama.
Awuzange uqale lokhu ngemali. Uqale lokhu into yangempela, into eqinisile kuwe. Kungani kukhona umhlatshelo omkhulu kangaka? Uqale lokhu...